Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Shiinaha ayaa hawada ka saaray Boeing 737 MAX inay dib ugu soo laabato cirka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Duuliyeyaasha Shiinaha waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan tababar cusub ka hor intaysan duullimaadyada ganacsiga bilaabin halka Boeing looga baahan yahay inay rakibto software iyo qaybo dheeraad ah.
The Maamulka Duulista Rayidka ee Shiinaha (CAAC) maanta lagu dhawaaqay in ay dhibaataysan tahay Boeing 737 MAX Diyaaradaha ayaa loo fasaxay inay dib ugu soo laabtaan duulimaadka Shiinaha - suuqii ugu dambeeyay ee ugu weyn oo ay diyaarada ku sugeysay ogolaansho.
Shiinaha ayaa ugu weyn 737 MAX duullaankii Mareykanka, iyadoo 97 diyaaradood ay ku shaqeynayeen 13 xabbo ka hor inta aan la joojin.
"Ka dib markii la sameeyay qiimeyn ku filan, CAAC waxay tixgelisaa in tallaabooyinka sixitaanku ay ku filan yihiin wax ka qabashada xaaladdan ammaan-darrada ah," CAAC ayaa lagu yiri website-keeda, iyadoo soo afjareysa ku dhawaad ​​saddex sano oo xayiraad lagu saaray diyaaradda gudaha Shiinaha.
Sida laga soo xigtay CAAC, Duuliyeyaasha Shiinaha waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan tababar cusub ka hor intaysan duullimaadyada ganacsiga bilaabin halka Boeing looga baahan yahay inay rakibto software iyo qaybo dheeraad ah.
Maraykanku waxa uu oggolaaday in duullimaadyadu dib u bilowdaan Diseembar 2020 ka dib markii software iyo wax ka beddel lagu sameeyay fiilooyinka qaarkood. Midowga Yurub wuxuu fasaxay bishii Janaayo. Brazil, Canada, Panama, iyo Mexico, iyo sidoo kale Singapore, Malaysia, India, Japan, Australia, iyo Fiji ayaa iyagana oggolaaday.
"Go'aanka CAAC waa tallaabo muhiim ah oo lagu soo celinayo si badbaado leh 737 MAX si loogu adeego Shiinaha, "Boeing ayaa tiri, isagoo raaciyay inay la shaqeyneysay maamulayaasha "si ay diyaaradda ugu soo celiso adeegga adduunka oo dhan."
Sannadkii 2020, Shiinuhu wuxuu la wareegay US si uu u noqdo suuqa duulimaadka ee ugu weyn adduunka, sida laga soo xigtay xogta Xarunta Duulista.